Suuqa shaqada iyo ganacsiga - Örnsköldsviks kommun
- Suuqa shaqada iyo ganacsiga
Ilaa boqolkiiba 80 oo bulshada ku nool degmada, oo jiro 20 ilaa 64 sano, weey shaqeeyaan. Inta dumar iyo raga oo shaqeeyo waa isku tiro. Goobaha laga shaqeeyo waxaa ugu badan shirkadaha wax soo saarka. Shirkadooyinka ugu weeyn oo wax dhoofiyo waxaa kamid ah kuwa kimikada, haydarooliga ah, nidaamka socosiinta iyo soo saarida dhirta oo alaabta laga suubiyo. Bulsho badan waxey ka shaqeeyaan caafimaadka, daryeelka bulshada iyo goobaha waxbarashada. Degmada iyo gobalka baa ah shaqo bixiyaasha ugu weeyn.
Hey’adda socdaalka baa mas’uul ka ah sharciga deggenaanshada iyo kan shaqeynta oo bulshada aanan kamid eheen wadamada woqooyiga ama wadan kamid eh midoowga yurub.
Xafiska shaqada[Arbetsförmedlingen] waxey kaalmo siiyaan dadka shaqo raadiska ah iyo shaqo bixiyaasha oo doonaayo shaqaalo. Bogga internetka oo xafiska shaqada waxaa lagu soo qoraa shaqooyinka bannaan. Waxaa xitaa jiro shirkadooyin oo qofka shaqo siinaayo oo markaas kadib shirkado kale kuu kala diraayo.
Degmada waxey isku daba ridaa, ayadoo la shaqeyneyso qasnadda caymiska[Försäkringskassan] iyo xafiska shaqada, arrimaha tababrida shaqooyinka. Qofka oo muddo dheer jiranaa, dhaawac shaqo soo gaaray ama sabab kale darteed u baahan inuu ka qeyb-qaato shaqo tababarid siduu dib uga mid noqdo suuqa shaqada. Dadka oo aad curyaanka u ah oo suuqa shaqada ka qeyb-qaadankarin waxey xaq u leeyahiin iney degmada ka helaan meherada maalmaha.
Xafiska shaqada iyo Qasnadda caymiska waxaa boggaga internetkooda ka heleysaa warbixin oo dhowr luqadood oo kala duwan.
Degmada Örnsköldsvik waxey hido iyo dhaqan u leedahay shirkadooyinka. Haddii ey shirkad kuu furantahay ama aad xiiseyneysid inaad mid furatid fadlan ku soo dhawoow oo la soo xiriir qeybta u adeegida shirkadaha oo degmada. Ayaga waxey warbixin kaa siin karan lokaalada, lacagta aad ku hirgalin laheed, qorsheynta shirkadaada, xeerarka, xafisyada aad u baahantahay inaad la xiriirtid iyo meelaha kale aad kaalmada ka helikartid.
Qeybta u adeegida shirkadaha oo degmada waxaad ka heli: 0660- 883 86 ama 0660-887 27.